ခ, R. အမ်ဘေဒကာအသက်, သေခြင်း, ဇနီး, ကလေးများ, မိသားစု, အတ္ထုပ္ပတ္တိ & ပိုပြီး - နာမည်ကြီးကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး
ခ, R. အမ်ဘေဒကာအသက်, သေခြင်း, ဇနီး, ကလေးများ, မိသားစု, အတ္ထုပ္ပတ္တိ & ပိုပြီး
နာမည်အပြည့်အစုံ Bhimrao Ramji Ambedkar
နာမည်ပြောင် (များ) Babasaheb, Bheem
အလုပ်အကိုင် ဥပဒေပညာရှင်၊ စီးပွားရေးပညာရှင်၊ လူမှုပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးသမား
နိုင်ငံရေးခရီး သူ၏နိုင်ငံရေးအခြေအနေကို ၁၉၃၆ ခုနှစ်တွင်စတင်ခဲ့သည်။ ၁၉၃၆၊ သြဂုတ် ၁၅ တွင်သူသည်သူ၏နိုင်ငံရေးပါတီဖြစ်သော“ လွတ်လပ်သောအလုပ်သမားပါတီ” ကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။
•ပါတီသည် ၁၉၃၇ ခုနှစ်ဗဟိုဥပဒေပြုလွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲတွင်ပါဝင်ခဲ့ပြီးအမတ်နေရာ ၁၄ နေရာရရှိခဲ့သည်။
•နောက်ပိုင်းတွင်သူသည်လွတ်လပ်သောအလုပ်သမားပါတီကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံအနှံ့အပြားဖွဲ့စည်းထားသည့် Castes အဖွဲ့ချုပ်အဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ သို့သော်ပါတီသည် ၁၉၄၆ ခုနှစ်အိန္ဒိယဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာညီလာခံတွင်ကျင်းပသောရွေးကောက်ပွဲတွင်ဆန္ဒရှိသည့်ရလဒ်မရရှိခဲ့ပါ။
•သူသည် Lok Sabha ရွေးကောက်ပွဲတွင်နှစ်ကြိမ်ပါ ၀ င်ခဲ့သော်လည်းရှုံးခဲ့သည်။
မွေးနေ့ 14 Aprilပြီ 1891
မွေးရပ်မြေ Mhow အလယ်ပိုင်းပြည်နယ်များ၊ ဗြိတိသျှအိန္ဒိယ (ယခုအိန္ဒိယနိုင်ငံ Madhya Pradesh ရှိ)
သေနေ့ ဒီဇင်ဘာလ 6, 1956
အသက် (သေသည့်အချိန်) ၆၅ နှစ်
ဇာတိမြို့ Mhow, Madhya Pradesh, အိန္ဒိယ
ကျောင်း (များ) • Madhya Pradesh ရှိ Mhow ရှိကျောင်းတစ်ကျောင်း
• Elphinstone အထက်တန်းကျောင်း၊ ဘုံဘေ (ယခုမွန်ဘိုင်း)
ကောလိပ် / တက္ကသိုလ် •မွန်ဘိုင်း Elphinstone ကောလိပ်
• Bonn, ဂျာမနီတက္ကသိုလ်
• Gray's Inn, ဘားသင်တန်းအတွက်လန်ဒန်
• D.Sc. လန်ဒန်တက္ကသိုလ်ကနေစီးပွားရေး၌
• Ph.D ဘွဲ့ကို။ 1927 ခုနှစ်တွင်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်၌တည်၏
ဇာတ် Dalit Mahar
ဝါသနာ စာဖတ်ခြင်း၊ ရေးသားခြင်း၊ ချက်ပြုတ်ခြင်း၊ ခရီးသွားခြင်း၊ သီချင်းများနားထောင်ခြင်း
ဆုများ, ဂုဏ်ထူး, အောင်မြင်မှုများ 1990 ခုနှစ်တွင် Bharat Ratna
•ပညာသင်ယူပါ၊ ဖွဲ့စည်းပါ၊ လှုပ်ရှားပါ။
•သင့်တင့်လျောက်ပတ်သောဘ ၀ ကိုနေထိုင်ရန်သင်ယုံကြည်ပါကအကောင်းဆုံးအကူအညီဖြစ်သောမိမိကိုယ်ကိုကူညီနိုင်သည်ဟုသင်ယုံကြည်သည်။
သူ့နောက်မှအမည်ပေးသည့် Institution များ / နေရာများ လေဆိပ်
ဒေါက်တာ Babasaheb အမ်ဘေဒကာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်
•ဒေါက်တာ B.R. အမ်ဘေဒကာ Ratan Award
အိန္ဒိယ Dalit Sahitya အကယ်ဒမီမှ
ဒေါက်တာ အမ်ဘေဒကာ Samajik Nyay ဆု
ဒေါက်တာ Babasaheb အမ်ဘေဒကာအမျိုးသားဆု
•ဒေါက်တာ B.R. အမ်ဘေဒကာအမျိုးသားဆု (ဒေါက်တာ B.R. အမ်ဘေဒကာအားကစားဖောင်ဒေးရှင်းမှ)
• Dr. Babasaheb အမ်ဘေဒကာနိုဘယ်ဆု (အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးညီလာခံမှ)
• Bharat Ratna Dr. အမ်ဘေဒကာဆု
ဇနီး / အိမ်ထောင်ဖက် ပထမဇနီး ရာမဘီအမ်ဘေဒကာ (190 ၁၉၀၆ မှ ၁၉၃၅) (သူမကျန်းမာသည်အထိ)
ဒုတိယဇနီး Savita အမ်ဘေဒကာ (။ ၁၉၄၈ မှ ၁၉၅၆)
ကလေးများ သား (များ) - ရာဂျရတ်အမ်ဘေဒကာ (ကွယ်လွန်)၊
သမီး - အင်းဒူ (သေသည်)
မိဘများ ဖခင် - Ramji Maloji Sakpal (ကြည်းတပ်မှအရာရှိ)
အမေ - Bhimabai Sakpal
မောင်နှမများ အစ်ကို (များ) - Balaram, Anandrao
အစ်မ (များ) - Manjula, Tulasi, Gangabai, Ramabai
မှတ်စု: သူ့တွင်မောင်နှမ ၁၃ ယောက်ရှိပြီး ၄ င်းတို့ထဲမှညီအစ်ကိုသုံးယောက်နှင့်ညီမ ၂ ယောက်သာကျန်ခဲ့သည်။
အကြိုက်ဆုံးအစားအစာများ Plain ဆန်, Arhar Dal, Masoor Dal, ကြက်သား, ငါး
အကြိုက်ဆုံးစာအုပ် (များ) Leo Tolstoy ၏ Tolstoy ၏အသက်၊ Les misérables၏ဗစ်တာဟူဂို၊ သောမတ်စ် Hardy ၏ Madding လူဝေးနှင့်ဝေး
အကြိုက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ် (များ) ဂေါတမဗုဒ္ဓ၊ ဟာရှက်ချန်ဒရာ (အိန္ဒိယဘုရင်)၊ ကဘိဒါ (အိန္ဒိယကဗျာဆရာ)
B. R. Ambedkar အကြောင်းအနည်းငယ်သာသိရှိပြီးသောအချက်အလက်များ
ခ R. အမ်ဘေဒကာဆေးလိပ်သောက်ခဲ့သလား
ဘီ။ အမ်ဘေဒကာသည်အရက်ကိုသောက်ခဲ့သလား။ မသိပါ
သူသည် ၁၈၉၁ ခုနှစ်တွင်မာရသီမိသားစုတွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီးသူ့အသက် ၁၄ နှစ်နှင့်နောက်ဆုံးကလေးဖြစ်သည်။ သူ့မိသားစုသည်အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ မဟာရပ်ရှတရာရတ်နာဂရီခရိုင်ရှိအမ်ဘာဗတ်မြို့ Mandangad Taluka တွင်ဖြစ်သည်။
သူ့အဖေသည် ၁၈၉၄ တွင်ဗြိတိသျှအိန္ဒိယစစ်တပ်မှအငြိမ်းစားယူခဲ့ပြီးနှစ်နှစ်အကြာတွင်မိသားစုနှင့်အတူ Satara (Maharashtra ရှိမြို့) သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ Maharashtra ၌အခြေချနေထိုင်ပြီးသည့်နောက်တွင် B. R. Ambedkar သည်သူ၏မိခင်ကိုဆုံးရှုံးခဲ့သည်။
B. R. Ambedkar ၏အမည်မှာ Sakpal ဖြစ်သည်။ သူ၏ဖခင်သည်သူ၏ကျောင်း ၀ င်ချိန်အတွင်းသူ၏ဇာတိကျေးရွာ Ambadawe အမည်ကို Ambadawekar အဖြစ်မှတ်ပုံတင်ခဲ့သည်။
သူသည်လူ့အဖွဲ့အစည်းမှအနိမ့်အမြင့်အဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရပြီးလူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်းမှအထက်တန်းကျောင်းအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့သည့်ဆရာများနှင့်ကျောင်းနေဖက်များကသူ၏ကျောင်းချိန်တစ်လျှောက်လုံးအရှက်ရခဲ့ရသည်။ သူကအခြေအနေကိုနောက်ပိုင်းတွင်သူ၏စာအုပ်“ peon, ရေမရှိ” ခေါင်းစဉ်ဖြင့်ရှင်းပြခဲ့သည်။
သူကျောင်းနေချိန်တွင်သူသည်ဆရာဖြစ်သည့် Mahadev Ambedkar ၏ကျောင်းသားဖြစ်သည်။ သူသည်ပုဏ္ဏားဖြစ်သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်ဆရာကသူ၏အမည်သည် 'Ambadawekar' မှ 'Ambedkar' သို့ပြောင်းခဲ့သည်။
၁၈၉၇ တွင်သူ၏မိသားစုသည်မွန်ဘိုင်းသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီးထိုတွင်သူသည် Elphinstone အထက်တန်းကျောင်းသို့တက်ရောက်ခဲ့သည် (သူသည်ကျောင်းတွင်တစ်ခုတည်းသောထိတွေ့မှုမရှိခဲ့ပါ) ။ ထို့နောက်သူသည်အသက် ၁၅ နှစ်အရွယ်၌ ၁၉၀၆ ခုနှစ်တွင်ရာမဘိုင် (၉ နှစ်အရွယ်မိန်းကလေး) နှင့်လက်ထပ်ခဲ့သည်။
မွန်ဘိုင်းခ R. အမ်ဘေဒကာရဲ့ Elphinstone ကောလိပ်
မိမိအမင်္ဂလာဆောင်သည်သူ၏ပညာရှင်များအတွက်သူ့ကိုဖျောင်းဖျခဲ့ပါဘူး။ သူသည် ၁၉၀၇ ခုနှစ်တွင်တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်ခဲ့ပြီးနောက်မွန်ဘိုင်းရှိ Elphinstone ကောလိပ်တွင် ၀ င်ခွင့်ရခဲ့ပြီး၎င်းသည်အောင်မြင်မှုမရရှိသေးသည့်ရပ်ရွာမှပထမဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်“ ဗုဒ္ဓနှင့်သူ၏တရားတော်” စာအုပ်တွင်သူသည် Dalit လူ့အဖွဲ့အစည်းမှလူများသည်ထိုအခိုက်အတန့်လေးကိုကျင်းပလိုသောဆန္ဒကိုဖော်ပြခဲ့သည် (၎င်းသည်သူတို့အတွက်ကြီးမားသောအောင်မြင်မှုတစ်ခု) ။
၁၉၁၂ ခုနှစ်တွင်သူသည်နိုင်ငံရေးသိပ္ပံနှင့်စီးပွားရေးဘာသာရပ်ဖြင့်ဘုံဘေယူနီဆက်တက္ကသိုလ်မှဘွဲ့ရရှိခဲ့ပြီး Baroda (ယခုဂူဂျာရတ်) ပြည်နယ်တွင်အစိုးရအလုပ်တစ်ခုရခဲ့သည်။ ဒီအလုပ်ကသူ့အတွက်တံခါးအသစ်တွေဖွင့်ပေးခဲ့တယ်၊ ၁၉၁၃ မှာသူဟာ Baroda ပြည်နယ်ပညာသင်ဆုမှတဆင့် US မှာကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ်မှာဘွဲ့လွန်တက်ဖို့အခွင့်အရေးရခဲ့တယ်။ အဆိုပါပညာသင်ဆုကိုသုံးနှစ်တာလစဉ်လတိုင်း₹ 1,060.25 (ပေါင် ၁၁.၅၀၊ စတာလင်ပေါင်) ဖြင့်ချီးမြှင့်သော Gaekwads of Baroda မှပေးအပ်ခဲ့သည်။
၁၉၁၃ ခုနှစ်တွင်သူအသက် ၂၂ နှစ်အရွယ်တွင်အမေရိကန်သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီး၊ သူသည် ၁၉၁၅ ခုနှစ်တွင် MA ပြီးစီးခဲ့သည်။ ဘောဂဗေဒအတွက်အထူးပြုနှင့်အတူတူပင်အဘို့မိမိအစာတမ်း '' ရှေးအိန္ဒိယကုန်သွယ်ရေး '' တင်ပြခဲ့သည်။
ထို့နောက်အိန္ဒိယသို့ပြန်လာပြီးဘားဒါဘုရင်အားကာကွယ်ရေး ၀ န်ကြီးအဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့သည်။ ၁၉၁၆ တွင်ဒုတိယအကြိမ်မြောက်အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏အမျိုးသားခွဲတမ်း - သမိုင်းနှင့်သရုပ်ခွဲလေ့လာမှုဆိုင်ရာမဟာသိပ္ပံဘွဲ့အတွက် ထပ်မံ၍ လူမှုရေးဆိုင်ရာခွဲခြားဆက်ဆံမှုကိုထပ်မံရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ 1927 ၌တည်၏။
အောက်တိုဘာလ 1916 ခုနှစ်တွင်သူသည်ဘားသင်တန်းအတွက်လန်ဒန်မြို့ရှိ Gay's Inn ၌လျှောက်ထားခဲ့သည်။ တစ်ပြိုင်နက်တည်းမှာပင်သူသည်သူ၏စီးပွားရေးပါရဂူဘွဲ့ကိုလန်ဒန်စီးပွားရေးကျောင်းတွင်စတင်ခဲ့သည်။ ၁၉၁၇ ဇွန်တွင်ဘာဒါပညာသင်ဆုအပြီးတွင်အိန္ဒိယသို့ပြန်ခဲ့ရသည်။ ၁၉၁၈ တွင်သူသည်နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးပါမောက္ခအဖြစ်ဘုံဘေရှိ Sydenham စီးပွားရေးနှင့်စီးပွားရေးကောလိပ်တွင်တက်ရောက်ခဲ့သည်။
လန်ဒန်စီးပွားရေးနှင့်နိုင်ငံရေးသိပ္ပံကျောင်းမှပါမောက္ခများ၊ သူငယ်ချင်းများနှင့်ခ။ R. အမ်ဘေဒကာ
လေးနှစ်အကြာ 1921 ခုနှစ်တွင်သူသည် 'ရူပီး၏ပြproblemနာ: ၎င်း၏ဇာစ်မြစ်နှင့်၎င်း၏ဖြေရှင်းချက်' ခေါင်းစဉ်သည်သူ၏စာတမ်းတင်ဆက်ဖို့လန်ဒန်ကိုပြန်သွားဖို့ခွင့်ပြုချက်ရနှင့်နောက်ဆုံးတွင်မိမိသခင်၏ဘွဲ့ပြီးစီးခဲ့သည်။
1923 ခုနှစ်တွင်သူသည်မိမိအ D.Sc. ကိုလိုက် ဘောဂဗေဒ၌။ ထိုနှစ်တွင်ပင်သူသည် Grey's Inn မှသူ၏ဘားသင်တန်းကိုခေါ်ခဲ့သည်။ သူ၏တတိယမြောက်ပါရဂူဘွဲ့ဖြစ်သောကိုလံဘီယာ၊ ၁၉၅၂ နှင့် Osmania စတုတ္ထပါရဂူဘွဲ့ D.Litt တို့ဖြစ်သည်။ ၁၉၅၃ Honoris causa (စာမေးပွဲမပါဘဲချီးမြှင့်သောဘွဲ့များ) ရရှိခဲ့သည်။ သူ၏အောင်မြင်မှုများကြောင့်သူသည်အိန္ဒိယတွင်ပထမဆုံးပါရဂူဘွဲ့ကိုဆက်ခံသူဖြစ်သည်။
၁၉၂၅ ခုနှစ်တွင်ဘုံဘေသမ္မတကော်မတီတွင်ရွေးချယ်ခံရပြီးနောက် All-European Simon ကော်မရှင်နှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည်။
၁၉၂၇ တွင်သူသည်နဂိုအတိုင်းအခွင့်အရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သည်။ အကြမ်းဖက်မှုအစားသူသည်ခြေရာကိုလိုက်ခဲ့သည် မဟတ္တမဂန္ဒီ နှင့် Dalit လူများ၏တန်းတူအခွင့်အရေးအတွက်သောက်သုံးရေအရင်းအမြစ်များကိုဝင်ရောက်နှင့်ဘုရားကျောင်းထဲသို့ဝင်ရန်သူ၏အသံထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။
နဂိုအတိုင်းအခွင့်အရေးအတွက်တိုက်လေယာဉ်အဖြစ်လူသိများလာခြင်းကြောင့် ၁၉၃၂ ခုနှစ်တွင်သူသည်ဒုတိယအကြိမ်စားပွဲဝိုင်းညီလာခံသို့တက်ရောက်ရန်လန်ဒန်သို့ဖိတ်ကြားခံခဲ့ရသည်။ ဆွေးနွေးပြီးနောက် Poona Pact ဟုခေါ်သောနည်းလမ်းကိုသူတို့တွေ့ရှိခဲ့သည်။ Poona Pact အရဒေသဆိုင်ရာဥပဒေပြုလွှတ်တော်များနှင့်ဗဟိုကောင်စီရှိ Dalit အသိုင်းအဝိုင်းအားကြိုတင်မှာကြားထားမှုစနစ်အားခွင့်ပြုခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်ထိုသင်တန်းများကို Scheduled Tribes နှင့် Scheduled Classes ဟူ၍ သတ်မှတ်သည်။
ခ R. R. အမ်ဘေဒကာ Mahar တပ်ရင်းနှင့်လှုပ်ရှားမှု၏စစ်သားနှင့်အတူ
၁၉၃၅ တွင်သူသည်အစိုးရဥပဒေကောလိပ်တွင်ကျောင်းအုပ်အဖြစ်စတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး ၂ နှစ်နီးပါးအလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ ထိုနှစ်တွင်ပင် RBI (Reserve Bank of India) တည်ထောင်ခြင်းတွင်သူသည်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ played မှပါဝင်ခဲ့သည်။
၁၉၃၆ တွင်သူသည်နိုင်ငံရေးပါတီတည်ထောင်သူဖြစ်လာပြီး 'Independent Labour Party' ဟုအမည်ပေးခဲ့သည်။ ထိုနှစ်တွင်ပင်သူသည်သူ၏စာအုပ်ကို 'The Annihilation of Caste' ကိုစတင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါစာအုပ်နဂိုအတိုင်း၏တိုင်းပြည်ရဲ့အလေ့အကျင့်ဆန့်ကျင်ခဲ့သည်။
သူသည် Mahitma Gandhi နှင့်ကွန်ဂရက်တို့၏ Dalit အသိုင်းအဝိုင်းကို“ Harijans” အဖြစ်သတ်မှတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခြင်းကိုဆန့်ကျင်ခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်သူသည်ကာကွယ်ရေးအကြံပေးကော်မတီ၏အလုပ်သမား ၀ န်ကြီးနှင့် Viceroy ၏အလုပ်အမှုဆောင်ကောင်စီအဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းခံရသည်။ ၁၉၄၇ ခုနှစ်သြဂုတ်လ ၂၉ ရက်နေ့တွင်သူ၏ပညာဂုဏ်သတင်းကြောင့်လွတ်လပ်သောအိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ပထမဆုံးဥပဒေ ၀ န်ကြီးအဖြစ်လည်းကောင်း၊ လွတ်လပ်သောအိန္ဒိယအတွက်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတည်ဆောက်ရန်တာဝန်ရှိသည့်ကော်မတီဥက္ကCommittee္ဌအဖြစ်လည်းကောင်းရွေးချယ်ခံခဲ့ရသည်။
ဥပဒေရေးရာ ၀ န်ကြီးဌာန၏ခ
အိန္ဒိယ၏ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသည် ၁၉၅၀၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၆ ရက်တွင်စတင်ခဲ့သည်။ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးဒီမိုကရေစီ၏ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုရေးဆွဲရန် ၂ နှစ်၊ ၁၁ လနှင့် ၁၈ ရက်အချိန်ကိုယူခဲ့သည်။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်၊ အခွင့်အရေးတန်းတူညီမျှမှုကိုရရှိရန်နှင့်နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိလူ့အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးအကြားကွာဟချက်ကိုဖယ်ရှားရန်ဖြစ်သည်။ ဤဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသည်ပညာရေးနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကိုသီးသန့်အမျိုးအစားရှိသူများအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများပေးခဲ့သည်။ အိန္ဒိယဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖွဲ့စည်းခြင်းတွင်သူပါဝင်ခဲ့သောကြောင့်သူသည်အိန္ဒိယဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၏ဖခင်အဖြစ်ကျော်ကြားသည်။ ထို့အပြင်သူသည်အိန္ဒိယဘဏ္Commissionာရေးကော်မရှင်ကိုတည်ထောင်ရာတွင်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ played မှပါ ၀ င်ခဲ့သည်။ လူမှုရေးအရရောစီးပွားရေးအရပါကြီးထွားလာဖို့တိုင်းပြည်ကိုကူညီခဲ့တယ်။
သီရိလင်္ကာတွင်ဗုဒ္ဓဘာသာပညာရှင်များနှင့်ဘုန်းတော်ကြီးများစည်းဝေးကြီးတက်ပြီးနောက် ၁၉၅၀ တွင်ဗုဒ္ဓဘာသာသို့ကူးပြောင်းခဲ့သည်။ ၁၉၅၅ ခုနှစ်တွင်အိန္ဒိယဗုဒ္ဓဘာသာလူ့အဖွဲ့အစည်း (Bharatiya Bauddha Mahasabha) ကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၁၉၅၆ ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ ၁၄ ရက်နေ့တွင်သူသည်လူထုပွဲကိုစီစဉ်ခဲ့ပြီးနောက်လိုက် ၅ သိန်းကျော်ကိုဗုဒ္ဓဘာသာသို့ကူးပြောင်းခဲ့ပြီး 'ဗုဒ္ဓနှင့်ဓမ္မ' ဟူသောစာအုပ်ကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်။
သူလည်းလှုပ်ရှားမှုကို ဦး ဆောင်; အလုပ်သမားများအတွက်စက်ရုံနာရီ (တစ်နေ့ ၁၄ မှ ၈ နာရီ) လျှော့ချရန်တောင်းဆိုသည်။
သူသည်အိန္ဒိယတွင်အလုပ်သမားကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအက်ဥပဒေ၊ မိန်းမနှင့်ကလေး၊ သတ္တုတွင်းသားဖွားအကျိုးခံစားခွင့်နှင့်အမျိုးသမီးအလုပ်သမားလူမှုဖူလုံရေးရန်ပုံငွေများအတွက်အမျိုးသမီးများအတွက်ဥပဒေများစွာချမှတ်ခဲ့သည်။
သူသည် ၁၉၄၈ ခုနှစ်မှ စတင်၍ မျက်စိအမြင်အာရုံနှင့်ဆီးချိုရောဂါခံစားနေရပြီး ၁၉၅၄ မှအိပ်ရာဝင်ခဲ့သည်။ အကျိုးဆက်အားဖြင့် ၁၉၅၆ ဒီဇင်ဘာ ၆ ရက်တွင်သူအိပ်ပျော်နေစဉ်ဤလောကသို့နှုတ်ဆက်ခဲ့သည်။
ခ။ R. အမ်ဘေဒကာ Mahaparinirvana ပုံရိပ်
ကွယ်လွန်ပြီးနောက် ၁၉၉၀ တွင်အိန္ဒိယ၏“ Bharat Ratna” အားအမြင့်ဆုံးဂုဏ်ပြုခဲ့သည်။
သူဟာစာအုပ်ကောင်းတစ်ပုဒ်ပါ။ သူသည်သူ၏အိမ်“ Rajgriha” ကိုဘုံဘေတွင်ဒီဇိုင်းထုတ်ခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့်သူ၏စာအုပ်အမြောက်အမြားကိုသိမ်းဆည်းရန် (ခန့်မှန်းခြေ ၅၀၀၀၀) ။ သူ၏စာကြည့်တိုက်သည် ၁၉၂၄ မှ ၁၉၃၄ အထိဘုံဘေ၌အကြီးမားဆုံးစာကြည့်တိုက်ဖြစ်သည်။
၂၀၀၀ ခုနှစ်တွင်“ Dr. Babasaheb Ambedkar” ကိုပြန်လွှတ်ပေးလိုက်သည်။ အဆိုပါရုပ်ရှင်ခ R. R. အမ်ဘေဒကာရဲ့ခရီးအပေါ်အခြေခံပြီးနှင့် Jabbar Patel ကညွှန်ကြားခဲ့သည်။
Babasaheb Ambedkar Hindi ရုပ်ရှင်ပိုစတာ
B. R. Ambedkar ၏“ ကိုယ်တိုင်ဗီဇာကိုစောင့်နေခြင်း” ၏ကိုယ်တိုင်ရေးအတ္ထုပ္ပတ္တိ ၁၉၃၅-၁၉၃၆ ကာလအတွင်းရေးသားခဲ့ပြီးယခုကိုလံဘီယာယူနက်စကိုတွင်ဖတ်စာအုပ်အဖြစ်အသုံးပြုသည်။ ဤတွင် B. R. အမ်ဘေဒကာ၏ဘဝအကြောင်းကိုဗီဒီယိုတစ်ခုဖြစ်သည်:
Michael Jackson ကိုမွေးဖွားခဲ့တယ်
မွေးဖွား၏ melania Trump နေ့စွဲ
Yeh hai aashiqui dubey Namita
တ ဦး တည်း ဦး တည်ချက် zikn malik အတ္ထုပ္ပတ္တိ